Myths about HIV - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
HIV နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အယူအဆအမှားတှေ
HIV ရောဂါပိုးဆိုတာ…. အသဈမဟုတျဘဲ ပျေါပေါကျခဲ့တာ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာပွီဖွဈပမေယျ့….. လူတှကွေားထဲမှာတော့ HIV နဲ့ ပတျသကျတဲ့ အယူအဆအလှဲတှေ… ထငျမွငျခကျြအမှားတှရှေိနဆေဲပါ…. ခုဆကျလကျဖျောပွမှာကတော့…. လူတှသေိနတေဲ့ လှဲမှားနတေဲ့ HIV နဲ့ပတျသကျတဲ့…. အယူအဆအမှားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ…..
(1) HIV ပိုးရှိတဲ့သူအနားမှာ နရေုံနဲ့ ရောဂါကူးနိုငျတယျ
တကယျတော့ HIV ဆိုတာ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သူရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကထှကျတဲ့ အရညျတဈခုခု (ဥပမာ သှေး သုတျရညျ မိနျးမကိုယျကနထှေကျတဲ့အရညျ နို့ရညျ) နဲ့ နောကျတဈယောကျရဲ့ ပါးစပျ မိနျးမကိုယျ စအို ဒါမှမဟုတျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဒဏျရာတဈခုခုရှိနရေငျ…..ဒါမှမဟုတျ သှေးကွောထဲကို တိုကျရိုကျ ဝငျသှားမှသာ ကူးနိုငျတာမြိူးပါ…သာမနျပှဖေ့ကျရုံ အစားအသောကျအတူစားရုံ အတူတဈအိမျတညျးနရေုံ ရခြေိူးခနျး အိမျသာအတူသုံးရုံ ထိတှရေုံ့ ခြှေးနဲ့ထိရုံ လောကျနဲ့ မကူးနိုငျပါဘူး
(2) HIV ကို ကုလို့ပြောကျတယျ
တကယျတော့ HIV ကို အပွီးအပွတျပြောကျအောငျ ကုလို့ရတဲ့ဆေး ဒီနထေိ့မပျေါသေးပါဘူး…. သငျ့လြျောတဲ့ ကုထုံးနဲ့ကုသမှူကို တိတိကကြ မှနျမှနျကနျကနျလိုကျနာ ရငျတော့…. HIV ပိုးကို အတျောပမာဏနညျးသှားသညျအထိ လြှော့ခလြို့ရနိုငျပွီး သကျတမျးကွာကွာနနေိုငျတာမြိူးလောကျပဲ ကုသနိုငျတာပါ….
(3) HIV ဟာ လိငျတူဆကျဆံတဲ့အခွောကျတှမှောသာ ဖွဈတဲ့ရောဂါ
လုံးဝမှားပါတယျ…. HIV ဟာ လိငျတူလိငျကှဲ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ မဆို အကာအကှယျမပါဘဲ ဆကျဆံရငျ ကူးနိုငျတဲ့ရောဂါမြိူးပါ
(4) လကျထပျပွီးသူတှမှေဆို HIV ပိုးစဈစရာမလိုတော့သလို ကူးမှာလဲ စိတျမပူရတော့ဘူး
လကျတှမှေ့ာတော့ မှားပါတယျ…. သငျဟာ သငျ့အိမျထောငျဖကျကို အမွဲသံသယနဲ့ ဆကျဆံနဖေို့ မလိုအပျသလို… မကျြစိစုံမှိတျ တသကျလုံးစာ ယုံကွညျပဈလိုကျဖို့ကတြော့လညျး ရာနှူနျးပွညျ့ သငျ့တျောမှနျကနျတဲ့ အဖွတေဈခု မဟုတျပါဘူး…
ကံမကောငျးစှာနဲ့ ကြှနျမတို့ဟာ ကြှနျမတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျအပွုအမူတှကေိုပဲ ထိနျးခြုပျလို့ရတာပါ… တဖကျသားရဲ့ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အပွုအမူတှထေိ လိုကျထိနျးခြုပျဖို့ မဖွဈနိုငျပါဘူး…. တခြို့စုံတှဲတှဟော နှဈစဉျ HIV အပါအဝငျ လိငျကတဆငျ့ ကူးစကျတတျတဲ့ ရောဂါရှိမရှိ စဈဆေးကွတာဟာ…. တကယျတော့ ကောငျးတဲ့အလအေ့ထတဈခုပါ
(5) နှဈယောကျစလုံးမှာ HIV ပိုးရှိနရေငျ ကှနျဒုံးသုံးစရာမလိုတော့ဘူး
လကျတျေ့မှာတော့ ဒါဟာမဟုတျပါဘူး…. HIV ပိုးရှိနတေဲ့လူနှဈယောကျ အကာအကှယျမသုံးဘဲ အတူနလေိုကျရငျ… မလိုလားအပျဘဲ ကိုယျဝနျရနိုငျပါတယျ… သောကျနတေဲ့ ART ဆေးက ကိုယျဝနျမရဖို့တော့ မကာကှယျပေးနိုငျပါဘူး… ကှနျဒုံးကသာ အကာအကှယျပေးနိုငျမှာပါ…. နောကျအရေးကွီးတဲ့ တဈခကျြက ကိုယျကူးခံထားရတဲ့ HIV အမြိူးအစားနဲ့ ကိုယျ့ partner ရဲ့ HIV အမြိူးအစားမတူညီတဲ့အခါ …လကျရှိသောကျနတေဲ့ HIV ကုထုံးကို မအောငျမမွငျဖွဈစနေိုငျပွီး ကုသမှူကိုရှူပျထှေးစပွေီး ဒုက်ခမြားစနေိုငျပါတယျ….
HIV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆအမှားတွေ
HIV ရောဂါပိုးဆိုတာ…. အသစ်မဟုတ်ဘဲ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာပြီဖြစ်ပေမယ့်….. လူတွေကြားထဲမှာတော့ HIV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အယူအဆအလွဲတွေ… ထင်မြင်ချက်အမှားတွေရှိနေဆဲပါ…. ခုဆက်လက်ဖော်ပြမှာကတော့…. လူတွေသိနေတဲ့ လွဲမှားနေတဲ့ HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့…. အယူအဆအမှားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…..
(1) HIV ပိုးရှိတဲ့သူအနားမှာ နေရုံနဲ့ ရောဂါကူးနိုင်တယ်
တကယ်တော့ HIV ဆိုတာ ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ အရည်တစ်ခုခု (ဥပမာ သွေး သုတ်ရည် မိန်းမကိုယ်ကနေထွက်တဲ့အရည် နို့ရည်) နဲ့ နောက်တစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ် မိန်းမကိုယ် စအို ဒါမှမဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာတစ်ခုခုရှိနေရင်…..ဒါမှမဟုတ် သွေးကြောထဲကို တိုက်ရိုက် ဝင်သွားမှသာ ကူးနိုင်တာမျိူးပါ…သာမန်ပွေ့ဖက်ရုံ အစားအသောက်အတူစားရုံ အတူတစ်အိမ်တည်းနေရုံ ရေချိူးခန်း အိမ်သာအတူသုံးရုံ ထိတွေ့ရုံ ချွေးနဲ့ထိရုံ လောက်နဲ့ မကူးနိုင်ပါဘူး
(2) HIV ကို ကုလို့ပျောက်တယ်
တကယ်တော့ HIV ကို အပြီးအပြတ်ပျောက်အောင် ကုလို့ရတဲ့ဆေး ဒီနေ့ထိမပေါ်သေးပါဘူး…. သင့်လျော်တဲ့ ကုထုံးနဲ့ကုသမှူကို တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန်လိုက်နာ ရင်တော့…. HIV ပိုးကို အတော်ပမာဏနည်းသွားသည်အထိ လျှော့ချလို့ရနိုင်ပြီး သက်တမ်းကြာကြာနေနိုင်တာမျိူးလောက်ပဲ ကုသနိုင်တာပါ….
(3) HIV ဟာ လိင်တူဆက်ဆံတဲ့အခြောက်တွေမှာသာ ဖြစ်တဲ့ရောဂါ
လုံးဝမှားပါတယ်…. HIV ဟာ လိင်တူလိင်ကွဲ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မဆို အကာအကွယ်မပါဘဲ ဆက်ဆံရင် ကူးနိုင်တဲ့ရောဂါမျိူးပါ
(4) လက်ထပ်ပြီးသူတွေမှဆို HIV ပိုးစစ်စရာမလိုတော့သလို ကူးမှာလဲ စိတ်မပူရတော့ဘူး
လက်တွေ့မှာတော့ မှားပါတယ်…. သင်ဟာ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို အမြဲသံသယနဲ့ ဆက်ဆံနေဖို့ မလိုအပ်သလို… မျက်စိစုံမှိတ် တသက်လုံးစာ ယုံကြည်ပစ်လိုက်ဖို့ကျတော့လည်း ရာနှူန်းပြည့် သင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ အဖြေတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး…
ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူတွေကိုပဲ ထိန်းချုပ်လို့ရတာပါ… တဖက်သားရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတွေထိ လိုက်ထိန်းချုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…. တချို့စုံတွဲတွေဟာ နှစ်စဉ် HIV အပါအဝင် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါရှိမရှိ စစ်ဆေးကြတာဟာ…. တကယ်တော့ ကောင်းတဲ့အလေ့အထတစ်ခုပါ
(5) နှစ်ယောက်စလုံးမှာ HIV ပိုးရှိနေရင် ကွန်ဒုံးသုံးစရာမလိုတော့ဘူး
လက်တေ့်မှာတော့ ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး…. HIV ပိုးရှိနေတဲ့လူနှစ်ယောက် အကာအကွယ်မသုံးဘဲ အတူနေလိုက်ရင်… မလိုလားအပ်ဘဲ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်… သောက်နေတဲ့ ART ဆေးက ကိုယ်ဝန်မရဖို့တော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး… ကွန်ဒုံးကသာ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ…. နောက်အရေးကြီးတဲ့ တစ်ချက်က ကိုယ်ကူးခံထားရတဲ့ HIV အမျိူးအစားနဲ့ ကိုယ့် partner ရဲ့ HIV အမျိူးအစားမတူညီတဲ့အခါ …လက်ရှိသောက်နေတဲ့ HIV ကုထုံးကို မအောင်မမြင်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကုသမှူကိုရှူပ်ထွေးစေပြီး ဒုက္ခများစေနိုင်ပါတယ်….